Swoop inotanga ndege itsva kuenda kuPalm Springs kubva kuEdmonton
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Swoop inotanga ndege itsva kuenda kuPalm Springs kubva kuEdmonton
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Swoop inotanga ndege itsva kuenda kuPalm Springs kubva kuEdmonton.
Kuzvipira kwaSwoop kuEdmonton chiratidzo chakajeka chekuti kune chivimbo muAlberta's Recovery Plan. Nzira nyowani dzakapfuura neCanada uye kuPalm Springs dzinovhura mikana inonakidza yekushanya uye bhizinesi.
Kuve nekuwedzera kubatanidza muCanada uye nekupfuura kuburikidza neEdmonton International Airport kwakakosha mudunhu.
Kukura kwendege kuchaona huwandu hwendege hweSwoop muguta guru reAlberta huchiwedzera 76% zvichienzaniswa nemazinga ekutanga-denda.
Kuwedzera kweSwoop kunotsigira kusikwa kwemabasa zana nemakumi mana ekuwedzera akananga uye anotenderera uye inofungidzirwa madhora zana nemakumi maviri emamiriyoni ehupfumi ekuita muna 140.
nhasi, Swoop, imwe ndege yekuCanada inodhura zvakanyanya, yakasimbisa kuzvipira kwayo kuEdmonton Metropolitan Region nekuzivisa nezvebasa idzva kune imwe US ​​uye nzvimbo sere dzepamba kubva kuWestern Canadian base. Kudyara kutsva kwendege kwakapembererwa mangwanani ano pamwe nekuvhurwa kwendege nyowani yeSwoop, iyo ichabhururuka ine zita rekuti #Edmonton.
Kukura kwendege kuchaona SwoopKufamba kwendege muguta reAlberta kunowedzera 76% zvichienzaniswa nedanho rekutanga-denda, richitsigira kusikwa kwemamwe mabasa zana nemakumi mana emamwe mabasa akasarudzika uye aitarisirwa madhora zana nemakumi maviri emamiriyoni emabasa ehupfumi muna 140.
"Ichi chiitiko chikuru kune Swoop apo tinosimbisa kuzvipira kwedu kutungamira nzira yekufamba nendege yakaderera-pasi muCanada uye tichisimbisa chinzvimbo chedu sendege ine nzvimbo dzakawanda dzekuenda kubva kuEdmonton," akadaro Charles Duncan, Mutungamiri weSwoop. "Nekutarisa kwakasimba mukukura uye Edmonton semumwe wedu, ticharamba tichipa vafambi vedu ndege dzisingaperi uye nemitengo yakaderera tichitsigira kudzoreredzwa kwehupfumi hweCanada hwekushanya."
Kuwedzerwa kwenzvimbo sere itsva dzekuCanada kuenda kuchirongwa chezhizha cheSwoop kuchaona sevhisi isingamire kubva kuEdmonton kuenda kuCharlottetown, Comox, Halifax, Kelowna, Moncton, Ottawa, Regina neSaskatoon.
Swoop ichave yekutanga mutakuri kuunza isingamisiki yekubatanidza kubva kuEdmonton International Airport kuenda kuCharlottetown neMoncton uye hurongwa hwechirimo hwendege huchaonawo kudzoreredzwa kwebasa kuLondon, Ont.
Kutanga Zvita 16, kuvepo kweSwoop kuyambuka muganhu kuri kukura kubva kuEdmonton nekuwedzera kwesevhisi nyowani ku Palm Springs. Iyo yakarongwa isingamire sevhisi ku Palm Springs ichashanda kaviri pasvondo.
Kelly Adams anoti:
Ndapota bvisa kunyoresa